ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် နစ်ဆန်းမတ်ခ်ျများ | နစ်ဆန်းမတ်ခ်ျ ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Blue Nissan March 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Silver Toyota March 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl White Nissan March 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Black Nissan March 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl White Nissan March 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Lks 116 ညှိနှိုင်း
Silver Nissan March 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Black Nissan March 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Silver Nissan March 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl White Nissan March 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Grey Nissan March 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Brown Nissan March 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Black Nissan March 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Brown Nissan March 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Lks 103 ညှိနှိုင်း
Silver Nissan March 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အ...
Lks 70 ညှိနှိုင်း
Pearl White Nissan March 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger....
Lks 68 ညှိနှိုင်း
Silver Nissan March 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အ...
Lks 73 ညှိနှိုင်း
Silver Nissan March 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အ...
pink Nissan March 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတ...
Red Nissan March 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင...
စူပါ မီနီ ကားတစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ နစ်ဆန်း မတ်ခ်ျကို ပြည်တွင်းမှာ အသုံးပြုလျက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ အများစုကတော့ လေလံ ဈေးသက်သာတဲ့ မတ်ခ်ျလေးတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာ နဲ့ မှာယူကြပြီး မြို့တွင်း မောင်းနင်မူတွေမှာ သုံးစွဲလျက်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အကြိုက်များကြပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ကား ဖြစ်တဲ့ နစ်ဆန်း မတ်ခ်ျတွေကို အင်ဂျင် ဆီစား သက်သာတဲ့ ၁၃၀၀ စီစီအောက် ၁၂၀၀ စီစီ မှာ မှာယူကြပါတယ်။ အရောင်းအ၀ယ် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ကြီး ရှိပြီး နာမည်ကြီးလှတယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုယိုတာ ပတ်ဆိုတို့လို ကားတွေထက်တော့ အသုံးပြုမူ နည်းပါတယ်။
တစ်ပတ်ရစ် နစ်ဆန်း မတ်ခ်ျကားများကို ကားလေလံ ကုမ္ပဏီတွေကနေ တစ်ဆင့် လည်းကောင်း၊ လှမ်းမှာယူနိင်သကဲ့သို့ ရောက်ရှိပြီးသားကားမှ လည်းရွေးချယ် ၀ယ်ယူနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တင် အမေရိကမှတော့ နစ်ဆန်း မတ်ခ်ျကို နစ်ဆန်း မစ်ခရာ လို့ သိကြပါတယ်။ အာရှမှတော့ မတ်ခ်ျလို့ပါပဲ သိကြပါတယ် ။ ထုတ်ခဲ့တာကတော့ ၁၉၈၂ လောက်ကတည်းကပါ။ အရင် နစ်ဆန်း ချယ်၇ီလို့ခေါ်တဲ့ ကားအသေးစား စီးရီးနေရာမှာ ပြန်ပြီး ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးဆက် (၄) ခုရှိတဲ့ အထဲက ပြည်တွင်းမှာ အတွေ့ရများတဲ့ စီးရီးမှာ မျိုးဆက် ၃ ဆက်မြောက်ထဲက ၂၀၀၂ ကနေ ၂၀၀၇ ထိ ထုတ်တဲ့ K 12 မော်ဒယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျကတော့ K12 C ဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အသုံးများတဲ့ မော်ဒယ်နှစ်များ
ထုတ်တာက အော်တို၊ မန်နျူးယယ်၊ ရှိပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ အော်တိုကိုသာ အသုံးများပြီး အင်ဂျင်အနေနဲ့ ၁၅၀၀ လီတာ မှာ ဒီဇယ် ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှတော့ ၁.၂ လီတာ၊ ၁.၀ လီတာတို့ကို သုံးပါတယ်။ နောက်ဖုံး တံခါး အပါအ၀င် တံခါး (၅) ပေါက် ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကိုတော့ လက်ရှိမှာ မှာယူမူမရှိပေမဲ့ တစ်ဆင့် ပြန်လည်ရောင်းချမူတွေမှာ ရှိနေဆဲပါ။ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ အစရှိသဖြင့် ခုနှစ်များမှာ ၀ယ်ယူ ရောင်းချ မှာယူမူတွေ ရှိနေပါတယ်။ စလစ် လွတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့အင်ဂျင် ရှေ့ဘီးယက် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀မှာ မျိူးဆက် လေးဆက်မြောက် ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ပုံစံတွေပြောင်းသွားမှာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စူပါ မီနီကားလေးတွေ ဖြစ်ပြီး အတွင်းဖက် အင်ဂျင် လေးအောက် ဖွဲ့စည်းစမှု အနေနဲ့ ရှေ့အင်ဂျင်၊ ရှေ့ဘီးမောင်း စနစ်တွေကို နစ်ဆန်းမတ်လေးတွေမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာ ကောင်းပြီး လှပသေသပ်တဲ့ လက်ရာတစ်ခုကို နစ်ဆန်းမတ်ခ်ျလေးတွေမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး မျိုးဆက် (၄) ဆက်လောက် ရှိ်တဲ့ အထဲမှာ တတိယမျိူးဆက်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၂ ကနေ ၂၀၁၀ ထိထုတ်တဲ့ မော်ဒယ်တွေကို ပြည်တွင်း တစ်ပတ်ရစ်ဈေးကွက်နဲ့ ဂျပန် လေလံတွေမှာ ရေပန်းစားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ၊ ၂၀၀၉ မော်ဒယ်တွေဟာ ပိုပြီး အ၀ယ်များတဲ့ အထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ထိုမျိုးဆက် အတွက်က မောဒယ်တွေကိုတော့ နစ်ဆန်းက K 12 မော်ဒယ်တွေလို နာမည်ပေးထားပါတယ်။ အရင် မော်ဒယ်တွေကနေ ပြောင်းလဲမှုတွေ အနေနဲ့ အနောက်ခုံ ဆလိုက်ဆွဲနိုင်ခြင်း၊ မော်ဒယ်မြင့်တွေပေါ်မှာ သော့မလို နည်းပညာ စနစ်ပေါင်းဖက်မှု၊ ၁၂၀၀ စီစီ၊ ၁၄၀၀ စီစီ၊ နဲ့ ၁၅၀၀ စီစီ ( ဒီဇယ် ) စတဲ့ အင်ဂျင်ရွေးစရာများ ပါဝင်လာခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နစ်ဆန်း မတ်ခ်ျကားတွေဟာ အသေးစားကားလေးတွေ ဖြစ်တာမို့ ပုံမှန်ကားတွေလောက် အနောက်ခန်းမှာ ပစ္စည်းတင်လို့မရတာ ကြိမ်းသေပါပဲ ။ လူ (၅) ယောက်စီးနိုင်ပေမဲ့လို့ နေရာ အရွယ်အစား အနည်းငယ်ကျဉ်းတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂၀၀ စီစီ ရှိပြီး မြို့တွင်းမှာ ရှိတဲ့ ရူပ်ထွေးမှုတွေ အတွက် ကားပါကင်ထိုးမှုမှာ လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဈေးနှုန်းလည်း ချိုသာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်အလိုက်ပေါ် မူတည်ပြီး ဈေးက ကွာသွားပါတယ်။ ၂၀၀၇ လောက်ထိ ဈေးကွက်ထဲမှာ ကျန်နေသေးတဲ့အတွက် ကျပ်သိန်း ၆၀ ၊ ၇၀ လောက်ကနေ စပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပုံပြောင်း ၁၁၅၊ ၁၂၀ သိန်း လောက်ထိ ဈေးရှိပါတယ်။ နစ်ဆန်း အေဒီ ဗန်ကားတွေနဲ့ ဈေးသွား ဆင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကားရဲ့ ဂရိတ်နဲ့ အရောင်ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေး ကွာဟ သွားနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်ကို အပြာရောင် ၊ငွေရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင် စသည့်ဖြင့် ရွေးနိင်ပါတယ်။ မတ်ခ်ျကားလေးတွဟာ ဟတ်ဘတ်ကားလို့ လည်း ဆိုနိင်သကဲ့သို့ သူရဲ့ ကိုယ်ထည်ပုံစံက စူပါ မီနီကား အမျိုးအစားထဲမှာ ပါရှိပါတယ်။ နစ်ဆန်း မတ်ခ်ျကို Nissan AD Van ကဲ့သို့ မြို့တွင်း သွားသွားလာလာ ကားအမျိုးအစားတွေကို ၀ယ်ယူလိုသူများ အတွက် အဆင်ပြေစေတဲ့ ကား အမျိုးအစား တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုနိင်မှာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်လမ်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။